Izindaba - Okufanele ukwenze uma ukusebenza komshini we-cartoning kuncipha
Okufanele ukwenze uma ukusebenza komshini we-cartoning kuncipha
Umshini we-cartoning umshini osebenza kahle kakhulu nekhwalithi. Ukusetshenziswa okungajwayelekile, ukwehluleka ukugcina ngesikhathi, njll. Konke kuyizimbangela noma ukuthonya umshini we-cartoning awukwazi ukusebenza ngokujwayelekile. Ukuze ukwazi ukusebenzisa umshini we-cartoning ngokuqinile isikhathi eside, kuyadingeka ukuqinisa ukugcinwa kwawo.
Lapho usebenzisa lolu hlobo lomshini we-cartoning, ukusebenza kahle kwemisebenzi kuvame ukungabi phezulu ngenxa yokusebenza okungafanele. Namuhla, ngithanda ukwethula kuwe ukuthi uwusebenzisa kanjani umshini we-cartoning.
1. Ngaphambi kokusetshenziswa, wonke umuntu kufanele enze amalungiselelo afanele. Hlola ukuthi ngabe yonke imishini yokuphepha ihlelwe kahle futhi yalungiswa kahle, futhi ubheke nokuthi ingabe inani lamafutha okugcoba nomoya ingaphakathi kwebanga elicacisiwe.
2. Vula amandla, vala inkinobho ezenzakalelayo ebhokisini likagesi, amandla esikrinini sokuthinta, ubonise isikrini sokuqala, thinta kancane noma iliphi iphuzu kusikrini sokuqala, thinta isikrini ukufaka isikhombimsebenzisi sokukhethwa kolimi, chofoza kalula ukuze usebenzise ulimi ukufaka isikhombimsebenzisi sokusebenza.
3. Cindezela inkinobho yempompo kawoyela bese ufaka ngesandla uwoyela othambisa imizuzwana cishe eyishumi. Udinga futhi ukukhipha isondo lesandla bese ulishintshanisa ngemijikelezo yokusebenza emi-3 kuye kwayi-4 ngokuya ngokuqondiswa komshini. Naka ukusebenza kwengxenye ngayinye, bese ufaka ibhokisi lephepha nebhodi lemithi, i-Manual, vula isondo lesandla, bese ulandela ukusebenza komshini. Naka ukusebenza kwengxenye ngayinye ngalesi sikhathi, bese uyilungisa ngesikhathi lapho kudingeka.